Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah - Abaalmarinno
Tan iyo aasaaskii EAI ee 2000, shaqadeenna wadajirka ah ee dhiirrigelinta leh waxay wax ka qabaneysaa dhibaatooyinka soo food saara bulshooyinka qaar ka mid ah kuwa ugu adag in la gaaro meelaha adduunka. Inlagu aqoonsado goor hore shaqadeena saameynta leh ee ka caawinta jaaliyadaha inay horumariyaan xalal wax ku ool ah oo waara ayaa hoos u dhigay waxayna nagu dhiiri galinaysaa inaan balaarino himiladeena iyo himiladeena si aan ugu adeegno kuwa badan.
Ka badan warbaahinta, hadda waa dhaqdhaqaaq. "
- Ronni Goldfarb, aasaasaha EAI
EAI wey guuleysatay abaalmarinta waxbarashada Microsoft madxafka farsamada casriga (Tech Museum for Innovation), xaflad loogu dabaaldegayo shaqsiyaadka iyo ururada adeegsanaya tikniyoolajiyadda si loo xaliyo dhibaatooyinka ugu daran ee adduunka. Abaalmarintan ayaa loo aqoonsaday EAI ballaarinteeda si lama filaanka ah iyo saameynta weyn ee adduunka tan iyo markii ugu horreysay ee loo magacaabay xil-wareejintii 2003.
Equal Access Nepal (EAN) ayaa heshay Abaalmarinta loo yaqaan 'eNGO Challenge Award South Asia' Aqoonsiga ahaanshaha mid ka mid ah NGO-yada ugu sarreeya ee leh xirfadaha macluumaadka ugu wanaagsan iyo teknolojiyadda is-gaadhsiinta (ICT) iyo aaladaha warbaahinta warbaahinta dhijitaalka ah ee anfacaya bulshada iyo bulshooyinka waaweyn ee ku nool dalalka Koonfurta Aasiya.
EAN ayaa lagu sharfay Abaalmarinta Xiriirka Avon: Ka Hadalka Rabshadaha Ka Dhanka Ah Haweenka shaqadooda ku saabsan CODKA- Samajhdari. VOICES waa Raadiyo iyo mashruuc wacyigelin oo ballaaran oo bulshada ah oo looga hadlayo isgoyska u dhexeeya rabshadaha ku saleysan jinsiga iyo HIV / AIDS. Aktarada iyo Avon Foundation for Women Ambassador Salma Hayek Pinault ayaa gudoonsiisay abaalmarinta intii lagu guda jiray munaasabad isku xir ah 57-dath fadhiga Guddiga Xaaladda Haweenka ee Qaramada Midoobay. Sharafta ayaa ku darsatay VOICES aqoonsigii hore ee 2010.
Barnaamijka raadiyaha dhalinyarada ee EAI ee Nepal “La sheekaysiga Saaxiibkeyga Ugu Fiican” (SSMK) ahaa Waxaa lagu aqoonsaday warbixinta UNICEF ee bishii Agoosto 2013 ee Is dhexgalka Macluumaadka iyo Teknolojiyada Isgaarsiinta Isgaarsiinta ee Xeeladaha Horumarineed ee Lagu Taageero iyo Awood Siinta Gabdhaha Yar yar ee La Waayey. SSMK waa show muujinaya dhalinyarada macluumaad muhiim ah oo ku saabsan kahortaga HIV / AIDS, STDs, uurka kahor, guurka, tahriibinta, tababarka xirfadaha, iyo la shaqeynta arrimaha laxiriira dagaalada Nepal iyo soo celinta nabada.
[EAI's] ikhtiyaarka jawaab celinta ee kanaalka badan… wuxuu si xawli ah u kordhin karaa heerarka kaqeybgalka dadka aan sida caadiga ah uga qeybqaadan karin caqabadaha xagga kharashka ama aqriska iyo qorista, sida gabdhaha la takooriyay ee qaangaarka ah. ”
Abaalmarintii ku guuleysatay 2010 ee CODKA - Samajhdari Waxaa loo xushay in ay soo bandhigto UN UN-ka Shirkii Caalamiga ah ee Xaaladda Haweenka oo ah mid ka mid ah labada moodal ee hal-abuurka leh ee UN Women ay jeclaan lahayd inay ku dayso adduunka oo dhan.
EAN wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Mid ka mid ah Abaalmarinta Gaarka ah ee Warbaahinta Adduunka loogu talagalay CODKA - Samajhdari. VOICES waa Raadiyo iyo mashruuc wacyigelin oo ballaaran oo bulshada ah oo looga hadlayo isgoyska u dhexeeya rabshadaha ku saleysan jinsiga iyo HIV / AIDS. In kabadan hal milyan oo dhagaystayaasha dhageysta toddobaadlaha ah, VOICES waxay jebisay aamusnaanta dadweynaha ee Nepal ee ku saabsan rabshadaha ku saleysan jinsiga iyo HIV markii ugu horeysay.
Hal sano oo barnaamij ah kadib, 35% jawaab bixiyaasha ragga ah ayaa sheegay inay kahadleen weerarada jirka hadii ay kadhaceen goob fagaaro ah marka loo barbar dhigo 16% bilowga barnaamijka.
Filimka dokumenteriga ah ee EAI ee ku saabsan saameynta daawada 'opium' iyo 'heroin' ee loo isticmaalo Afghanistan, Kani waa hamigayga, ku guuleystey Abaalmarinta Dukumiintiga ugu wanaagsan ee Dukumiintiga Tilmaanta Filimka 4 Gabdhaha Caalamiga ah ee Haweenka ee London, UK.
EAI waxaa loo xushay ku guuleystaha Suuqa Bangiga Adduunka Koonfurta Aasiya ee Suuqa Horumarinta tartan. Abaalmarintan ayaa lagu aqoonsaday ururada bulshada rayidka ee ugu sareeya fikradaha ugu hal abuurka badan ee ku saabsan sida loo horumariyo nafaqada.
Iyadoo la tixgelinayo saameynta SSMK, EAI waxaa la siiyay abaalmarinta Maalinta Caalamiga ah ee Carruurta ee Warbaahinta (ICDB) ee UNICEF.
EAI waxay heshay Abaalmarinta Caalamiga ah ee Guusha barnaamijka raadiyaha dhalinyarada ee Nepal “La sheekaysiga Saaxiibkeyga Ugu Fiican” (SSMK), waa bandhig siiya dhalinyarada macluumaad muhiim ah oo ku saabsan kahortaga HIV / AIDS, STDs, uurka kahor, guurka, tahriibinta, tababarka xirfadaha, iyo la shaqeynta arrimaha laxiriira dagaalada Nepal iyo soo celinta nabada.
Bandhigga waxaa sidoo kale lagu aqoonsaday abaalmarinta Global Junior Challenge Award, abaalmarin caalami ah oo ay xayeysiisay Digital World Foundation, oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo ay dhistay Dawladda Hoose ee Rome iyo lix shirkadood oo ICT-ga ah.
SSMK ayaa sidoo kale heshay abaalmarinta UNICEF ee soo-bandhigidda barnaamijka aadka u wanaagsan ee Maalinta Caalamiga ah ee Caruurta.
EA waxay heshay NASDAQ Abaal marinta Waxbarashada Matxafka, Faa'iidada Farsamada ee Aadanaha (Matxafka Tech ee San Jose, CA), taas oo lagu sharfayo ururada adeegsanaya tikniyoolajiyada si aad u wanaajinaysa xaaladda bina aadamka ee qaybaha waxbarashada, sinnaanta, deegaanka, horumarka dhaqaalaha iyo caafimaadka. Tani waxay ahayd aqoonsi xalka nasiibka ee aan u qorsheysanay oo aan ka bilownay dalka Nepal, iyadoo bixineysa waxbarasho noloshu isbeddeleyso oo ku saabsan xoojinta haweenka iyo gabdhaha iyo ka hortagga HIV / AIDS 10,400 Nepalese oo ku nool gobollada fog iyo kuwa la fogeeyo ee dalka.